May 11, 2021 N88LeaveaComment on नेप्सेमा उच्च अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण पुनः ३७ खर्ब माथि
काठमाडाैं । कोरोनाको दोस्रो लहरले जनजीवन प्रभावित भएको भएपनि धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकलाई कुनै असर गरेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज २७.४७ बिन्दुले उकालो लागेर दुई हजार ६७३.३१ मा पुगेको छ । कारोबार रकम समेत झण्डै रु छ अर्ब बराबर भएको छ ।नेप्सेका अनुसार कूल २२० कम्पनीको एक […]
May 11, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाबाट थप २२५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि
काठमाडाैं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट दुई सय २५ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, देशभर दुई सय २५ जनाको मृत्यु भएको आज पुष्टि भएको हो। जसमध्ये ७९ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयको तथ्यांकमा नआएका, तर नेपाली सेनाले दाहसंस्कार गरेको व्यक्तिको आज अपडेट गरिएको छ। जसले गर्दा मृत्यु […]
काेराेना अपडेट : थप ९ हजार ४८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
May 11, 2021 May 11, 2021 N88LeaveaComment on काेराेना अपडेट : थप ९ हजार ४८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडाैं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ९४८३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै २२५ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार जनाएको छ । यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या ४ हजार ८४ पुगेको छ । यसअघि सोमबार देशभर ९ हजार २७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने १३९ जनाको […]
रामकुमारी झाँक्रीको सांसद पद डेन्जर जोनमा
May 11, 2021 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्रीको सांसद पद डेन्जर जोनमा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने समानुपातिक सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने भएपछि एमालेको नेपाल समूहकी सांसद रामकुमारी झाक्रीको पद डेन्जर जोनमा परेको हो । यद्यपी एमालेले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई भने तत्कालै कारवाही नगर्ने भएको छ ।समानुपातिक सांसदलाई भने कानुन बमोजिम ह्वीप उल्लंघन […]
बिना मेकअप सुपरहिट भएकी यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि किन गरिनन मेकअप ?
May 11, 2021 N88LeaveaComment on बिना मेकअप सुपरहिट भएकी यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि किन गरिनन मेकअप ?
काठमान्डौ । दक्षिण भारतको चर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी उत्कृस्ट अभिनयको कारण सबैमाझ चर्चित छिन् । दर्शकमाझ उनले एक छुट्टै स्थान बनाएकी छिन् । उनको केहि दिन अगाडी २९ औ जन्मदिन परेको थियो । अभिनेत्री साई पल्लवीले अहिलेसम्म तामिल, तेलुगु र मलयालम फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । सन २०१५ मा रिलिज भएको फिल्म प्रेमबाट अभिनयको सुरुवात […]
सबैभन्दा धेरै पढेकी ‘ब्युटिफूल’ नायिका केकी अधिकारीकाे लोभलाग्दो सुन्दरता [फाेटाे फिचर]
May 11, 2021 May 11, 2021 N88LeaveaComment on सबैभन्दा धेरै पढेकी ‘ब्युटिफूल’ नायिका केकी अधिकारीकाे लोभलाग्दो सुन्दरता [फाेटाे फिचर]
काठमाडाैं । लोकप्रिय नायिका केकी अधिकारीको चर्चा नेपाली सिने जगतमा लोभलाग्दो छ । पिता बद्रि अधिकारी र माता लक्ष्मी अधिकारीको कोखबाट काठमाडौंको जोरपाटीमा सन् १९८९ को १७ डिसेम्बरमा उनकाे जन्म भएको हो । केकी निकै चन्चल जिज्ञासु स्वभावकी छिन् । केकी एक नेपाली अभिनेत्री तथा व्यावसायिक मोडेल हुन् । उनी थुप्रै नेपाली साङ्गीतिक भिडियो, टेलिभिजन […]
आमाको मुख हेर्ने दिन; बिना मगरले सासू ‘सीता दाहाल’ लाई लेखिन् यस्तो भाबुक पत्र
May 11, 2021 N88LeaveaComment on आमाको मुख हेर्ने दिन; बिना मगरले सासू ‘सीता दाहाल’ लाई लेखिन् यस्तो भाबुक पत्र
काठमाडौं, २८ वैशाख । आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यो दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ। यो घडीमा मातातीर्थ औँसी, मातृऔँसी एवं मातृ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ। आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झिने दिन हो । संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता, आमा, संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन हो, ‘आमा’ । हामीमध्ये धेरैले […]
रुघाखाेकी र ज्वराे त हो दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसेका भुपालको अचानक मृ त्यु
May 11, 2021 N88LeaveaComment on रुघाखाेकी र ज्वराे त हो दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसेका भुपालको अचानक मृ त्यु
काठमाडाैं । काठमाडौं महाराजगन्जका ३३ वर्षीय भूपाल थापाको घर त्रिवि शिक्षण अस्पतालनजिकै पर्छ। हिँडेर जाँदा पनि उनी केही मिनेटमै यो अस्पताल पुग्न सक्थे। १० दिनअघि उनलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने लक्षण देखिए। दुईचार दिन घरमै हेरौं भन्दै बसे। समस्या बढ्दै गएपछि उनको परिवारले शिक्षण अस्पतालमा भर्नाका लागि खोजी गरे। तर भर्ना पाउन नसकिने जवाफ पाएपछि […]
यी हुन् आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर चलचित्र क्षेत्रमा आएका नेपाली अभिनेत्री, के थियाे खास नाम ?
May 11, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर चलचित्र क्षेत्रमा आएका नेपाली अभिनेत्री, के थियाे खास नाम ?
काठमाडौँ । जन्मिदा एउटा नाम भए पनि करियर अघि बढेसँगै आफ्नो नाम बदल्ने गरेका छन्। यसरी आफ्नो नाम बदल्नु कुनै ठुलो कुरो हैन। सिने क्षेत्रका चर्चित धेरै सेलिब्रेटीहरुको वास्तविक नाम हामीमध्ये केहीलाई मात्र थाहा होला। आज हामी तिनै नेपाली कलाकारको कुरा गछौं जसले आजभन्दा करिब दुई दशकअघि नाम परिवर्तन गरेर आफ्नो नाम लुकाएका छन्। करिश्मा […]
कोरोनाको यस्तो भयावह स्थितिमा पनि सपना मगरले यसरी जलाईन बेवारिसे शव
May 11, 2021 May 11, 2021 N88LeaveaComment on कोरोनाको यस्तो भयावह स्थितिमा पनि सपना मगरले यसरी जलाईन बेवारिसे शव
यो दृश्य कुनै पनि बाहिरि देशको दृश्य हैन यो दृश्य पशुपति आर्यघाटको दृश्य हो ।यहाँ कोरोना संक्रिमितबाट ज्यान गुमाउनेहको दाहसंस्कार गर्न लाईनबद्द मुढा र काठहरु थुपारिएको छ ।यो ढंगले थुपारिएको छ कि यहाँ ला`शले समेत आफू जल्न लाईनमा बस्नुपर्छ । थाक थाक अनिगिन्ति थाकहरु देखिन्छन् र ती बेवारिसे लाशहरुलाई सपना रोकाया मगरले जलाईरहेकि छिन्।यो दर्दनाक […]